Kordhi Boggaga Booqashada oo Hoos u dhig Qiimaha Soo Kordhinta | Martech Zone
Sabtida, Maarso 20, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxay umuuqataa in shirkado badan oo aan lasoo shaqeeyay ay heystaan ​​markii aan fiirinayay bogagga booqashada iyo yareynta heerka soo kabashada. Maaddaama ay tahay cabiraad caan ah, waxaan arkaa shirkado badan oo hadafyo meel u dhigaya agaasimayaasha internetka loo hagaajiyo iyaga. Aniga kula talin maayo oo marar dhif ah ayaan ka taxadaraa in kor u kacdaydu ay ka badan tahay boqolkiiba sideetan.
Waxaa laga yaabaa in falcelinta ugu qosolka badan ee tan aan arkay ay tahay dadka jabinaya boggagooda ama qoraalladooda si ay dadku ugu khasban yihiin inay gujiyaan xiriir si ay ugu sii socdaan bogga xiga si ay u dhammaystiraan akhrinta maqaalka. Tani sidoo kale waxay caan ku tahay bogagga lagu bixiyo xayeysiinta…. inbadan oo muuqaal ah waxay lamid noqon karaan dakhli badan iyo xayeysiis badan oo la dhigo.
Hubaal in ku filan, bogagga booqashooyinkiiba way sii kordhayaan oo heerarka kacsiga ayaa hoos u dhacaya - ha ka fikirin in beddelaaduhu sidoo kale hoos u dhacaan, in kastoo, sababtoo ah akhristayaasha ayaa xanaaqsan ma heli karaan nuxurka ay raadinayeen
Haddii aad rabto inaad si daacad ah u kordhiso bogagga booqashada oo aad yareyso sicirka boodboodka, waxaan kugula talin lahaa kuwa soo socda:
Ka dhig boggaaga mid si sahlan loo akhrin karo! Qor pithy, waxyaabo aad u dhiirrigeliya oo ka faa'iideysta cinwaannada, cinwaano hoosaadyo, liisaska bulsheed, liisaska nambarada leh, iyo ereyada geesinimada leh si wax ku ool ah. Tani waxay dadka u oggolaan doontaa inay si dhib yar u dheefshiraan qoraalkaaga oo ay go'aan uga gaaraan inay doonayaan iyo in kale inay sii quusayaan. Ku degida bogga baaxadda weyn ee qoraalka waa hab lagu kalsoonaan karo oo dadka looga dhigo inay boodaan.
Sii martidaada waxyaabo kale! Kusoo raaci mawduucaaga waxyaabaha la xiriira. Adoo siinaya qoraallo laxiriira, bogag, ama wicitaano ficillo ah oo ay lajiraan nuxurkaaga, waxaad siineysaa xoogaa xulashooyin dheeri ah akhristahaaga halkii aad ka wada boorin lahayd. Wixii WordPress ah, waxaan ka faa'iideystaa plugin ku xirnaanta "WordPress". Waa sax.
Shakhsi ahaan, waxaan aaminsanahay in sicirka boodboodayaasha iyo bogagga booqashada kasta ay yihiin halbeeg lagu qoslo ganacsiyada si loo qiyaaso guushooda suuqgeynta ee internetka. Ilaa iyo intaad ka bixin karto nooc ka mid ah isku xidhka u dhexeeya beddelaadyada la yeelashada bogga, maxaad u danaynaysaa haddii dadku helaan bartaada oo ay ka boodaan? Laga yaabee inaysan iyagu ahayn soo booqde sax ah? Waxaa laga yaabaa in bartaada internetka ay ku dhaawacantay natiijada raadinta sare ee eray aan muhiim ahayn. Miyaad taas u ciqaabi doontaa kooxdaada suuq-geynta taas?
Ganacsi ahaan, websaydhkaaga ama balooggu waa inuu wadaa waddo cusub, oo gacan ka geysanaya sidii loo sii hayn lahaa macaamiisha hadda jirta, ama gacan looga geysanayo abuuritaanka awood aad ku sameyso warshadahaaga (taas oo horseed u ah hoggaanno cusub oo caawiya sii-haynta macaamiisha). Beddelaaddu waa inay ahaadaan halbeeggaaga! Maahan Bogag Booqasho ama Qiimo Bounce. Waan ku faraxsanahay haddii macaamiishaydu ay ku soo degaan boggeyga, oo ay helaan foomka xiriirka, oo ay soo boodaan!
PS: Haddii aad tahay daabacaadda websaydhka oo lacagtaadu ka timaado dakhliga xayeysiinta, markaa waxaad u baahan kartaa inaad ka walwasho sicirka boodhka iyo bogagga booqashada kasta maxaa yeelay falaa toos ula xiriir dakhliga boggaaga. Waxaan si adag uga hadlayaa shirkadaha iyo goobahooda, in kastoo.
Tags: heerarka kabashadaKordhi boggaga booqashada kastabogag booqashokiibayaree heerarka kacsiga
Akhris weyn, waad ku mahadsantahay wadaagistiisa Douglas!
Waxa ka dhigaya bogagga kuwa soo jiidasho leh in ay sii dheeraadaan waa xaqiiqda ogaanshaha waxa ay u baahan yihiin iyo awood u siinta iyaga iyaga sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Taasi waxay kordhin doontaa isbeddelada hubaal! Sida ugu fudud ee ay halkaa ku gaareen, sida ugu fudud ee ay u helaan waxa ay raadinayaan iyo in badan oo ay kugu kalsoonaan doonaan marka xigta!